बिदाको प्रयोग बोझका लागि होइन, स्वस्थ मोजका लागि – Health Post Nepal
२०७५ फागुन ४ गते १०:३१
सप्ताहान्तको होस् या चाडपर्वको, बिदालाई उल्लासमय बनाउनुपर्छ, यो एक रोमाञ्चक क्षण पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ त्यसो भइदिँदैन । हामी हप्ताभरिको कामको चापले थुप्रिएका सबै काम बिदाका लागि साँच्छौँ । यसले बिदालाई झनै बोझिलो बनाइदिन्छ ।
नियमित कामको चापबाट छुटकारा पाउने र थप ऊर्जा प्राप्तिको उत्तम विकल्प हो, बिदा । त्यसैले यसलाई बोझिलो र भड्किलो नबनाऔँ ।
बिदा मनाउने प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको हो । भनिन्छ, भगवान्ले पनि समय–समयमा गुप्तवास, जंगलवास, सिकार, नदी तथा ताल भ्रमण गरेर नियमित दैनिकीलाई क्रमभंग गर्ने गर्थे । राजा महाराजाले त घरमै संगीत, नृत्यजस्ता विशेष मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्थे ।
पछि, औद्योगिकीकरणको विकाससँगै साप्ताहिक एक वा दुई दिन औपचारिक बिदा मनाउने प्रचलन आयो । हप्ताभरिको कामपछि १ दिन आराम गर्ने, परिवारलाई समय दिने, भेटघाट गर्ने, घरको काम गर्ने, बच्चाका लागि किनमेल गर्ने आदि काममा बिदा स्थापित हुँदै गयो । तर, हिजोआज बिदाका लागि पनि काम बढी हुँदै गएका छन् । बिदाका लागि थुप्रिएका कामको लामो सूची– भेटघाट, परिवार तथा बच्चाको किनमेलको सूची, नियमित चेकअप, सरसफाइ, पार्टी आदिले बिदा उल्लासमयभन्दा बढी झन्झटिलो बन्दै त छैन ?
जीवनलाई सदा उत्सासमय राखिरहन र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि नियमिततामा क्रमभंगता जरुरी छ । यसका लागि बिदा निर्विकल्प माध्यम हो । यसलाई बोझिलो बनाउने गल्ती नगरौँ ।
कसरी गर्ने त बिदाको उच्चतम सदुपयोग ?
१. व्यक्तिगत/पारिवारिक कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् ।
साथीभाइ भेटघाट, पार्टी, घुमफिरजस्ता कुराभन्दा पहिले आफ्नो नुहाइधुवाइ, परिवारसँग खाना खाने, आराम गर्ने काम पहिले गर्नुहोस् । धेरै ठाउँको ग्यादरिङ, धेरैलाई भेट्ने रुटिन, बच्चालाई घुमाउने वाचा आदिले तपाईंको व्यक्तिगत समय नमार्नुस् ।
२. बजेट तय गर्नुहोस् ।
विवाहित हुनुहुन्छ भने बच्चा, श्रीमान्–श्रीमतीलाई, अर्थात् पारिवारिक आवश्यकताअनुसार र अविवाहित हुनुहुन्छ भने प्रेमी–प्रमिकामा किनमेलको प्रतिबद्धता गर्नु सामान्य नै हो । यसले पारिवारिक माहोलमा पनि रमाइलो थप्छ । तर, कहिलेकाहीँ मागको सूची बढ्दै जान सक्छ । यदि आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको किनमेल गर्नुपर्यो भने त्यसले झन् तनाब थप्न सक्छ । त्यसैले किनमेलको प्रतिबद्धता गर्नुपूर्व आफ्नो बजेटलाई ध्यान दिनुहोस् र उपयुक्त बजेट छुट्यानुहोस् ।
बिदामा वर्षौंदेखि नभेटेका साथी, आफन्त भेट्ने, धेरै काम सक्ने, नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न जानेजस्ता धेरै योजना नबनाउनुहोस् । कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा सोचेजति काम नसकिन सक्छ र अचानक नसोचेका केही काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
३. चाडपर्व र संस्कृतिलाई सरलीकृत गर्नुहोस् ।
पछिल्लो समय हाम्रा चाडपर्व, संस्कृति भड्किला र महँगा बन्दै गएका छन् । आयातित महँगो खानपान, लुगाफाटो, आफन्तलाई दिनुपर्ने समय र सम्मान आदिले कतिपय अवस्थामा चाड नै नआए हुन्थ्योजस्तो बनाउने गरेको पनि धेरैले सुनाउँछन्, जुन कालान्तरमा झन् हानिकारक बन्ने पक्का छ । अरुको देखासिकी गरेर आफूलाई थप दुःखी बनाउनु मूर्खता हो । चाड र संस्कृति मर्म भनेको आप्mनोपनको संरक्षण गर्दै परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण गर्नु हो । त्यसैले यसलाई बिगार्ने र महँगो बनाउने गल्ती नगरौँ ।
४. धेरै अपेक्षा नगर्नुहोस् ।
बिदामा वर्षौंदेखि नभेटेका साथी, आफन्त भेट्ने, धेरै काम सक्ने, नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न जानेजस्ता धेरै योजना नबनाउनुहोस् । कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा सोचेजति काम नसकिन सक्छ र अचानक नसोचेका केही काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा योजनाअनुरूप काम गर्न नसकेकोमा पश्चात्ताप हुन सक्छ । त्यसले थप दुःखीबाहेक केही बनाउँदैन । काम गर्ने प्रतिबद्धता पक्कै गर्नुहोस्, तर स्विकार्न सक्ने पनि बन्नुहोस् ।
५. प्रकृतिसँग समय बिताउनुहोस् ।
घुम्नु नै छ भने सकेसम्म प्राकृतिक ठाउँमा घुम्न जानुहोस् । प्रकृतिसँगको सामीप्यले मानिसले नसोचेको ऊर्जा प्राप्त गर्छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै मानिस प्रकृतिसँग टाढिएका छन् । आत्मिक शान्तिका लागि प्राकृतिक स्थान वरदान हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुहोस् । घरमै खेतबारीमा काम गर्ने, बच्चालाई पनि यस्ता काम सिकाउने गर्नुहोस् ।
६. घरमै पकाएको खानुहोस् ।
बिदा भन्नासाथ बाहिर खाना खानैपर्ने, आफन्तसँग ग्यादरिङमा पनि बाहिरबाट मगाएर खाने प्रचलन बढ्दो छ । आर्थिक र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले बाहिरको भन्दा घरमै बनाएर खानु लाभदायी छ । अझ सम्भव भए घरकै उत्पादन खानेमा जोड दिऔँ ।
७. हिँड्ने योजना बनाउनुहोस् ।
सहरी जीवनशैली मानव स्वास्थ्यका लागि अभिसाप बन्दै गएको छ । त्यसैले बिदामा लामो या छोटो एउटा गन्तव्य हिँडेर पुग्ने योजना बनाउनुहोस् । यो हिँडाइ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक हुनेछ ।
८. सक्दो सहयोग गर्नुहोस् ।
बिदामा भेटघाट र पार्टी मात्र प्राथमिकतामा नराख्नुहोस् । कोही पुरानो साथी, आफन्त, छिमेकी या अन्य कोही एक्लो छ, उसलाई कुनै सहयोग आवश्यक छ भने त्यस्तालाई साथ दिनुहोस् । सन्तुष्टि र खुसी दुवै मिल्नेछन् ।
९. चराचुरुंगी र जनावरलाई खाना खुवाउनुहोस् ।
यो संसारमा अन्य प्राणीको पनि अस्तित्व छ भन्ने मानिसले बिर्संदै गएको छ । चराचुरुंगीलाई वेला–वेलामा खाना खुवाउने गर्नाले आफूलाई र बालबच्चालाई पनि खुसी मिल्छ भने जनावरको संरक्षणका टेवा पुग्छ । प्रकृतिको संरक्षण र मानव जीवनरक्षाका लागि यो अपरिहार्य छ ।